Kurohwa nyoro naBabamunini Bofu - Nhau Dzevakuru
Kurohwa nyoro naBabamunini Bofu. Ndainge ndakaroorwa nemurume ainge anemari apa inini ndainge ndisina kana chinhu kwatakasangana kwacho you wouldn’t believe it but I guess Mwari can change hupenyu hwako just like that.
Ndakasangana nemurume wangu paparty yecousin yangu iye aitonge awuya neshamwari yake, ndakawona munhu achiuya kwandiri ndikabhoda kutiza nekuti ndainyara varume asi ndakapedzisira ndangomira ndikabva ndaita kunge ndafreezer akandimhoresa ndikatadza kubiritsa kana one word, akaburitsa pen nepaper out of all things ndokunyora number dzake ndokubva anditambidza. Ndakangoti these days munhu would give you a cellphone and ask you to put your number but ndakangotambira ndokubva ndaisa muhomwe. I contacted him and one think led to another and takazoroorana kusvikira nanhasi.
Murume wangu ainge ane brother yake raiva bofu waaigara naye saka pandakaroorwa ndakangobva ndagara kumba didn’t even think of kutsvaga basa nekuti ndainge ndichichengeta babamunini. Murume wangu achiyenda kubasa ini ndaisara naBabamunini. Bamunini hapana zvavaigona kuita vasina help asi vaigeza havo vega. Ndakayita nguva yekuti murume ainge achipota achiyenda out nebasa saka panguva yakadai ndaipota ndichizvibata bata manheru pandinenge ndamufonera dzimwe nguva ndaiwona hangu pono ndozvibata kusvikira ndazvitundisa and ndaitonge ndajaira since bedroom yedu was upstairs.
Pakuona pono apa ndaitoisa volume high hangu because ndaiziva kuti ndiri ndega. Bamunini vainge vakura varikuma 23 years old but vaigara vangori vega and sometimes ndaitombozvibvunza kuti vachiri mukomana here kana kuti, ndainge ndisati ndambovabvunza. Kugara kwedu tese made us get closer mazuva ese he felt kuti ane munhu anomudawo panyika.
Mumwe musi ndiripakati pekuwona pono murume wangu asipo ndainge ndasiya bamunini downstairs kuroom kwavo ndipo pandakanzwa door kuvhurwa ndikatsvaga remote kuti ndidzore volume ndikaishaya apa bamunini vainge vakamira padoor vachinzwa zvese. Bamunini vakabva vati nhai maiguru sei murikuchemerera kunge munhu arikusvirwa ivo mukoma vasipo hakasi kekutanga ndichikunzwai mukoma varikuzviziva here kuti murikupota muchisvirwa nevamwe varume ivo vasipo?
Ndakatanga kuseka ndikati aah sorry bamunini ndiri ndega iTV yandinenge ndichiwona plus ndinenge nditori pafoni namukoma wenyu huyai mubate bate pamubhedha munzwe kuti ndiri one. Ndakawona kuti bamunini didn’t believe me nekuti vakabva vafamba vachiuya kuzobata bata bed apa inini ndainge ndiri musvo and I didn’t think it would be a problem since vainge vasingaone. Vakabata bata pabed ndokubva rimwe ruoko rwabata mutepfetepfe wezamu ndikanzwa munhu akukumbira ruregerero ndikati chii nhai bamunini vachibva vati ndazvinzwa kuti ndabata zamu apo vachisekerera havo, chandaivamudira is vaitaura straight.
Bamunini vainge vakapfeka kamwe kashort kekuti mboro yavo yakabva yasimuka ipapo ndichibva ndati ko bamunini bhurugwa renyu ivo ndipo pavakati maiguru handisati ndambonzwa zamu. Ndakanzwa tsitsi ndokubva ndamuka ndichibva ndabata mboro yavo iri mubhurugwa ndichibva ndati this will be our secret bamunini ndikawona munhu asekerera.
Ndakavararisa pamubhedha ndichibva ndaburitsa mboro yavo mubhurugwa ndokuiyisa mumoromo ndichibva ndakunanzva nechiiyamwa. Ndakayamwa musoro wemboro iya and pasina kana nguva ndiye tsaaa tsaaaa tsaaa kuzadza huronyo kumeso kwangu. Ndakangoti se first time chete ndichibva ndatanga kutamba nayo mboro yavo futi ndikanzwa munhu achichemerera zvisingapere asi mboro yakabva yamira ndichibva ndarara paside navo ndikavati huyai Bamnini musvire henyu nekuti beche rangu ratota kare! Remember its our little secret.
Bamunini vakauya pamusoro pangu ndichibva ndabata mboro yavo ndokubva ndainangisa pamuromo webeche ndokuiti bvo mukati kati ndikanzwa ichisvika pedyo nechibereko chaipo. Bamunini vaikoira ivavo ndainakirwa zvekuti ndakatanga kuchemerera nekunakirwa. Varume mboro haina kuti uribofu, ndakasvirwa ndikapa kutenda. Vakaita kunge vanwa mushonga chaiwo zvekuti and I couldn’t believe it was his first time pasviro nekuti to be honest vaisvira kupfura murume wangu. I know I should not say this but its the truth.
Kusvikira nanhasi ndinopota ndichizvibatsira nababamunini kana murume ayenda out nebasa and I don’t even regret it. Nyoro yaBamnini inonaka zvekuti I am not even feeling guilty. I know a lot of you will judge me but mboro yebofu inonaka and I will not stop kufadza bamnini vangu nebeche. Tell me what you think in comments!
Previous articleKusvirwa neMurume weShamwari yangu paParty Kumba Kwavo
Next articleKuSeducer Brother Yangu kusvika andisvira nyoro